किन तपाईंको व्यवसाय छुट्टीको लागि मोबाइल तयार हुनुपर्छ Martech Zone
किन तपाईंको व्यवसाय छुट्टीको लागि मोबाइल-तैयार हुनुपर्दछ
सानो व्यवसाय शनिबार र ब्ल्याक फ्राइडा आउँदै गर्दा, यो इन्फोग्राफिकले छुट्टिको लागि तपाईंको व्यापारको लागि मोबाइल तयार हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर वर्णन गर्न खोज्छ। यहाँ छ वटा कारणहरू छन् तपाईंको व्यवसायको मोबाइल-तयार छुट्टीको लागि तामार वेन्ट्राउब, सामग्री मार्केटिंग प्रबन्धक, रिचलोकल.
उपभोक्ताहरू मोबाइलमा निर्भर छन्
तिनीहरू स्थानीय जानकारी खोज्दछन्
तिनीहरू मोबाइल खोज प्रयोग गर्दछ
उनीहरू हलिडे डिलहरू चाहन्छन्
तिनीहरू बहु उपकरणहरूमा खरीद गर्छन्।
तिनीहरूले मोबाइल मा ईमेल पढ्नुहोस्
मोबाइल मार्केटिंग आज कुनै पनि साना व्यवसायको लागि अविश्वसनीय मूल्यवान र आवश्यक छ। US 65% अमेरिकी उपभोक्ताहरूसँग एउटा स्मार्टफोन छ र% 35% ट्याब्लेटको स्वामित्व हुन्छ। त्यसोभए, तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? तामारा शीर्ष कारणहरू पहिचान गर्दछ किन तपाईको साना व्यवसाय मोबाइल छुट्टीको लागि तयार हुनुपर्दछ सुनिश्चित गर्न बिक्री अधिकतम छ।
टैग: छुट्टी किनमेलबिदामोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगमोबाइल वाणिज्यमोबाइल किनमेलकिनमेल